Iyo Achilles Nhema uye Chitsitsinho Chake: Pfupi Pfupiso - UniProyecta
Nhoroondo yacho ndeyekuti kuGirisi kwekare kwaive nemurwi mukuru uyo ​​shamwari dzake dzese dzaiyemura nekushinga uye kusimba, uye vavengi vake vaityira hunyanzvi hwake munzira dzehondo dzakadzidziswa kuna vamwari vavo. Yakadaidzwa Achilles uye inomiririra mumwe weanonyanya kuzivikanwa mavara paGomo reOlympus. Iwe unoda kuziva nhema yaro here?
Ini ndoda kukuudza hupenyu hwakakurumbira hwemurwi anotyiwa kuti iwe uzive akakosha nguva dzehupenyu hwake. Uchaona kubva pakuberekwa kwake kusvika pakufa kwake. Iyo sei aive mwari uye kuti aive asingafi sei kubva kumusoro kusvika kutsoka, asi akafa patsoka dzake. Neichi chikonzero museve mu chitsitsinho chake chakakonzera kufa kwake.
1 Ndivanaani vaive vabereki vaAchilles?
2 Hwechidiki hwaive sei Achilles?
3 Iyo Trojan Hondo
Ndivanaani vaive vabereki vaAchilles?
Achilles akabva kumubatanidzwa unoshamisa kwazvo, maari zvisikwa zviviri zvakabatanidzwa: munhu neizvo zvevamwari. Baba vake vaive Ini ndinorwa, gamba rinouraya uyo aive nerukudzo rwekuroora Thetis, mwarikadzi asingafi weOlympus.
Akanga ari mukadzi ane runako risingaenzaniswi, akanaka zvekuti Zeus naPoseidon vaida rudo rwake kwenguva yakareba, asi vakadzidza nezvechinhu chinotyisa, icho chaizoisa masimba avo paOlympus panjodzi, nekuda kweichi chikonzero vakasiya rudo rwavo kuna Thetis.
Ndeipi yaive nhau yakaipa iyi yakakutyisa zvakanyanya? Rimwe zuva, titan Prometheus akapa chirevo kuna mwari Zeus, chinhu ichi chakakanda chiporofita chisina kutarisirwa. Ikoko vakaona izvo Thetis aizozvara mwanakomana ane simba kwazvo, anokwanisa kudzora baba vake kusvika pakutora kutonga kwake.
Zeus naPoseidon vakatya kwazvo pavakanzwa nezvenyaya dzakadai, saka, hapana kana mumwe wavo aida kuve baba veichi chisikwa chakaipa, saka vakatendera mwarikadzi akanaka kuti aroore munhuwo zvake.
Zuva remuchato mukuru waThetis naPeleus rakasvika. Panguva yemabiko, Eris, mwarikadzi wekusawirirana, akamutsa gakava pakati pemwarikadzi Hera, Athena naAphrodite; kuve kutanga kwezvaizotevera kupera kwaAchilles.
Vese vaenzi vakashuvira mufaro wevakaroora vachangochata kuti vagare vachifara nekusingaperi, zvisinei, izvi hazvina kuitika saizvozvo. Nguva pfupi amai vake Achilles vaberekwa, mwarikadzi wemvura, akadzokera kugungwa nekudaro akasiya mwanakomana wake nababa vake. Izvi zvakakonzera kurwadziwa kukuru kune vanhu vaviri ava vaimuda zvakapenga uye vakamusuwa kwehupenyu hwavo hwese.
Hwechidiki hwaive sei Achilles?
Achilles, kubva pakuberekwa kwake, aive mukomana muhombe, aine simba rakakura. Zvakare, aimhanya kwazvo saka aizivikanwa sa "tsoka dzakareruka". Aive nehunhu hwakasimba, airatidza kushuva kukuru mukurumbira uye nyota yekuita zvechisimba kune vamwe vake vanhu. Nyaya dzinotaura kuti hunhu uhu hwakakonzerwa nekusiiwa kwaamai vake, izvo zvakamupa kusuwa kukuru mumoyo make.
Akararama makore ake ekutanga ehupenyu muPhtia pamwe nababa vake Peleo. Mudzidzisi wake mukuru aive Phoenix uyo akamudzidzisa izvo zvakakosha zvinhu kumwana wezera rake. Zvisungo zverudo neushamwari zvakaumbwa pakati pavo. Fénix aimuda sekunge aive mwanakomana wake, aigara achimuchengeta uye aive naye kusvika pazera rake rekuyaruka.
Munguva yehudiki hwake akasanganawo naPatroclus, jaya rakagovana naye zviitiko zvake zvese. Pamwe chete ivo vakadzidza hunyanzvi hwekurwa uye zvimwe zvidzidzo zvinovaita vatungamiriri vemauto gare gare. Ivo vaviri vakave shamwari dzakanaka kwazvo, vakagara vese kwehupenyu hwavo hwese.
Achilles paanopinda pazera rekuyaruka baba vake vanomutumira Chiron, mudzidzisi wake mutsva. Chiron yaive yakanakisa centaur, yakasarudzika kubva kune vamwe nekuve yakabudirira uye ine ruzivo rwakanyanya munzvimbo yehondo. Ndiye aidzidzisa muchinda mudiki hunyanzvi hwekudzivirira nekurwiswa munguva yehondo, mishonga nemarudzi ese ekupona muhondo.
Uyu murwi mukuru, mwanakomana wamwarikadzi amai nababa vanofa, akazvarwa aine hunhu hwaimusiyanisa nevamwe vamwari uye nevamwe vanhu, aive mwari. Ndiri kureva, anga asiri asingafi zvachose, murume angaita seasina kujairika saAchilles ave nerusina kusimba?
Iyo nyaya inotaurira kuti amai vake vasati vaenda, vakamunyika mumvura dzeStyx lagoon kuti vamupe kusafa. Sezvo iye akamubata netsoka dzake kumudzivirira kubva pakunyura kana kutakurwa nemafungu, havana kunyorova, uye havana kugashira simba rine simba remashiripiti. Naizvozvo, Achilles aigona kurarama chero kukuvara asi aifa kuburikidza netsoka dzake, nekudaro chirevo chakakurumbira:Chitsitsinho chaAchilles”, Seshoko rinoreva zvakafanana nekushaya simba.
Iyo Trojan Hondo
Nhevedzano yezviitiko zvakakonzera kurwa kukuru pakati pevaGiriki neveTrojans inozivikanwa seTrojan War. Hondo iyi yakafanotaurwa kwemakore mazhinji uye zvaitozivikanwa kuti Achilles anofira mairi. Thetis, amai vake vanodikanwa, vachiziva nezve chiziviso chinotyisa kudaro, vakamushambidza nemvura yemashiripiti kuti amupe kusafa.
Ipapo akaedza kuzvivanza kubva kumauto ehondo pakati pevanasikana vaMambo Lycomedes, asi kuyedza kwake hakuna zvakunobatsira, nekuti Achilles akawanikwa ari ega pasi pemuedzo wemumhanzi weguvhu, nhoo nepfumo. Saka akasimuka naOdysseus kunorwa padivi reuto reGreek.
Munguva yehondo yaaizivikanwa nehutsinye hwake, akaparadza maguta, akapamba zvaakawana munzira yake. Akadyara kutya pakati pevaTrojans sezvo ivo vaiziva kuti vaisazorarama pamberi pake. Muminda iyi yehondo akarasikirwa neshamwari yake huru, Patroclus, izvo zvakamutungamira kuuraya Hector uye kurwa nehasha huru uye nyota yekutsiva.
Mabhiza akapihwa maTrojans akashanda semusungo wekupinda muguta reTroy. Achilles paakayambuka madziro makuru akaramba achiparadza zvese zviri munzira yake, kunyangwe iye akawanawo rufu. Paris, mwanakomana waMambo Priam uye munin'ina waHector, akadzivirirwa namwarikadzi Aphrodite, aiziva kutanga zuva rakabudirira pachitsitsinho chaAchilles, zvichikonzera kufa nekukurumidza.
Hapana mubvunzo kuti Achilles Akanga ari mumwe wemagamba ane mukurumbira mungano dzechiGiriki. Kupinda kwake muHondo yeTroop kwakatendera maGreek kuhwina kurwa asi izvi zvakamutorera hupenyu hwake. Uyu muenzaniso wakajeka wekuti zvishuwo zvekutsiva, kutsamwa uye zvishuwo zvakaipa zvinotungamira kurufu runorwadza kupfuura gamba.
Izvi zvave zvirizvo, tinovimba iwe wakanakidzwa nekuverenga iyo Achilles ngano sekuda kwataida kukuudza nezvazvo. Kana iwe uine chero mibvunzo nezve gamba Achilles, unogona kusiya mhinduro pazasi.
kudzidziswa » tsika nemagariro » Ngano dzechiGiriki » Nhema yaAchilles uye Chitsitsinho